CILLAD BIYO AH OO XOOGAN: CILAD BIYO AH, SIMAN, MUUQAALKOODA IYO SAWIRADOODA - BEER CAGAARAN
Noocyada iyo noocyada cayayaanka biyaha: biyaha, gaddesh iyo kuwa kale duwan
On dusha sare ee dooxooyinka, webiyada iyo meydka kale ee biyaha waxaad arki kartaa cayayaanka si deg deg ah u weheliyaan dusha sare ee boogaha dheer. Tani - cayayaanka biyaha, kooxda oo dhan oo leh qashinka.
Waxay u yihiin amaan dadka, laakiin laguma talinayo in ay taabtaan, maadaama ay naftooda difaacayaan qaniinyo aad u xanuun badan. Cayayaanka waxay ku quudiyaan cayayaanka yaryar, dadka waaweynna waxay ku quudiyaan kalluunka, qaar ka mid ah qaybaha hoose waxay u duuli karaan. Si kastaba ha ahaatee, waxay taasi u sameeyaan oo keliya iyada oo loo badalayo inay badasho deegaankooda.
Qoyska biyuhu waxay ka kooban yihiin lix nooc, oo aan la mid ahayn midba midka kale. Waxay leeyihiin cabbirka jidhka 2mm ilaa 12 cm. Waxay u horseedaan qaab nololeed gaar ah oo biyo ah, dhammaantoodna waa raga. Cayayaanka ugu caansan ee biyuhu waa cirbiilaha biyaha iyo kuwa siman.
Waxaa jira qiyaastii 700 nooc oo ah cayayaanka biyuhu ka yimaadaan, taas oo ka duwan midba midka kale midabka iyo cabbirka. Cayayaankaasi waxa uu leeyahay jidh dheer oo dheer, kaas oo noqon kara 1 mm ilaa 3 cm, saddex lugood oo lugood ayaa ka baxa. Front - gaaban, loo baahan yahay si loo qabto wax soo saarka iyo xakamaynta xawaaraha dhaqdhaqaaqa. Lugaha dhexe iyo laabta waxaa loo isticmaalaa dhaqdhaqaaqa iyo leeyihiin dherer ah 1.5-2 jeer weynmarka loo eego biyaha jirka.
Maxay sababta cayayaanka biyuhu aysan u daadin, oo ay ku ordaan biyaha dusha sare? Cayayaanka ayaa lagu hayaa biyaha dushooda sababtoo ah xooga xiisaddiisa. Madaxa cayayaanka waxaa ku jira anteeno gaar ah oo xitaa ku qabsan kara xitaa jilicsanaanta dusha biyaha. Qalabka afka ayaa ah xoqin-nuugid, waxaana loo isticmaalaa in lagu nuugo waxa ku jira dhibbanaha.
Caawin! Qaar ka mid ah hoosaadyada biyaha ee jilicsan ayaa baalashooda leh, oo u isticmaal inay u guuraan ballabbooyinka. Si ku meelgaar ah ayay u degi karaan dusha sare ee dusha sare. Shakhsiyaadka lafdhabar la'aanta ah noloshooda oo dhan waxay ku qaataan isla kaydka.
Wareegiyeyaasha biyaha waxay dhigaan ukunta caleemaha iyo jirridda dhirta biyaha. Mararka qaarkood waxay yihiin hal, laakiin caadi ahaan kooxo 40-50 ah. Dhalada ayaa u eg sida qof weyn, laakiin waxay ku kala duwan tahay muraayad foosto yar yar iyo cabbir yar.
Biyaha biyuhu waxay ku yaallaan bakhaarro leh biyo iyo daaqado joogta ah oo aad u yar.
Yuu cunaa cayayaanka biyaha dhaadheer iyo maxay cunayaan? Wuxuu gaari karaa meel qarka u ah biyaha. Waxay quudineysaa qoyaanka, cayayaanka, kalluunka kalluunka. Waad ku mahadsan tahay indhaha waaweyn, boodhka biyaha ayaa awood u leh in uu wax ka ogaado ugxanta fog ka dibna wuxuu ku weeraraa iyada oogista. Waxay iyaga u noqonayaan cunto kalluun badan.
Sawir gacmeedka biyaha
Marka xigta, waxaad arki doontaa sawirrada cayayaanka biyuhu ka yimaadaan:
Boogtu waxay leedahay jilicsanaanta jilicsan, taas oo ay ugu wacan tahay cayayaanka magaciisa la helay. Labada lugood ee dhinacyada siyaabo badan ayaa uga sii daraya cabbirka dadka kale, waxaana loo isticmaalaa "jilbaha" marka biyaha la dhaqaajiyo.
Gladysh jecel yahay balliyada taagan, laakiin marar badan ayaa degaya buste kasta ama xitaa foosto biyo. Wuxuu sameyn karaa duulimaad dheer oo kaliya habeenkii si uu u helo meel cusub oo cunto ah. Sida cayayaanka kale oo dhan, midabka midabka leh wuxuu leeyahay qalab dilaacin-nuugaya, kaas oo ay ka dhigayso jirka dhibbanaha oo nuugaya nafaqooyinka.
Caawin! Caleemaha sariirta waxaa loogu yeeri karaa muyuusiko - waxa uu jiidi karaa jajabkiisa hore ee proboscis, isagoo daabacaya nooc ciriiri ah.
Waa maxay cilladda jilicsan iyo neefsashada xubnaha neefta? Biyaha, cayayaanka ayaa caloosha u soo jiidaya caloosha, oo ku soo qulqulaya qolof jilicsan. Xaaladdan, maqaarka cagaarka ah wuxuu neefsanayaa hawada qulqulka fudud, kaas oo ka helaya furitaan khaas ah oo ku yaal dhabarka caloosha. Inta lagu jiro quuska, cayayaanka ayaa soo ururiya hawada lagama maarmaanka ah, ka dib marka lagu xiro taargooyinka gaarka ah.
Smooth ugxanta cayayaanka ama kalluunka yaryar. Isla mar ahaantaana, waxaa laga yaabaa in lafilayo kalluunka ama shimbiraha. Si kastaba ha noqotee, dabeecadda ayaa ka hortageysa ilaaliyayaashan - dhabarkiisa waa iftiin, calooshiisuna waa mugdi.
Bedbug waxay dhigaysaa ukunta qaybta hoose ama qaybta hoose ee dhirta. 2 toddobaad kadib, dirxiga ayaa ka muuqda iyaga, oo la mid ah dadka qaangaarka ah, laakiin u fudud.
Gladysh maaha qofka weerara, inta badanna kulan uu la yeesho isaga ayaa iska dhigaya inuu dhinto ama soo saaro dareeraha ilaalinta urka leh. Si kastaba ha noqotee, markaad isku daydo in aad gacanta ku haysid, waxaad heli kartaa qaniinyo xanuun badan oo dhaawici kara wakhti aad u dheer, marmarka qaarkoodna xitaa khafiifiya.
Cayayaanka biyuhu waa qoyaan oo dhan oo ku nool nolol gaar ah oo ku saabsan mawjadaha biyaha ama webiyada oo leh tamar hadda jira. Iyagu waa kuwa geela leh, waxay leeyihiin qalab jahwareer ah, oo ay ku caawiyaan taas oo ay nuugaan juiceenta dhibbanaha. Noocyada qaarkood waxay leeyihiin baalashyo kuwaas oo ay u duuli karaan si ay u helaan meel cusub oo degan. Cayayaanka biyuhu maaha dadka weerara hase yeeshee waxay ku dhejin karaan ilaalinta iyagoo qaniinyo qaniinyo leh. Kuwa ugu caansan waa ciriiriga oo siman.
Sawir ah cayayaanka biyaha
Marka xigta waxaad arki doontaa sawir khariidad biya ah oo biya ah: